Hypernet: Tinya MuLatent Yakatemerwa Simba reComputer kana Kutengesa Yako Pako | Martech Zone
NeChishanu, Nyamavhuvhu 17, 2018 Chitatu, Nyamavhuvhu 15, 2018 Douglas Karr
Tekinoroji yeBlockchain ichiri mudiki, asi zvinonakidza kuona hunyanzvi huri kuitika uchitenderedza izvozvi. Hypernet ndeimwe yeiyo mienzaniso, otomatiki achiwedzera simba remagetsi kune chero chishandiso chiripo pawebhu. Iwe unofunga nezvemazana emamirioni eCUUs anogara asina basa kwemaawa panguva - achiri kushandisa rimwe simba, richiri kuda kuchengetedza, asi zvichinyanya kutambisa mari.
Chii chinonzi Decentralized Autonomous Corporation (DAC)?
Sangano rakazvimiririra rakazvimiririra (DAC), isangano rinotungamirirwa nemitemo yakanyorwa semapurogiramu emakomputa anonzi smart contract.
Hypernet yekutanga yekuvandudza haisi yavo ye-ketani chinhu; ndiyo off-cheni DAC programming modhi. Iyi modhi inoita kuti zvikwanise kumhanyisa macomputer akaenzana pane ine simba uye inogoverwa network yemidziyo, ese nenzira isingazivikanwe uye yekuchengetedza yega. Hypernet inounza zvishandiso pamwechete uye inoshandisa iyo kugadzirisa chaiko-nyika matambudziko.
Hypernet inoronga zvishandiso uye mabasa pane network kuburikidza ne blockchain scheduler. Izvo zvinowirirana zvinowirirana nezvinodiwa nemutengi nevakakodzera vanopa, inoona kuti mabasa apedzwa nemazvo sezvinobvira, uye zvinobatsira kuchengetedza kuchengetedzeka uye kuvimbika. Iyo DAC inoshandisa chiratidzo chiratidzo kuratidza kuti zviwanikwa zviripo sezviri kudikanwa kune vatengi vayo, kusanganisira:
Staking - Vatengi nevatengesi vanofanirwa kuisa chibatiso kuti vapedze compute mabasa. HyperTokens ndidzo chibatiso. Mutengesi anotora chibatiso pamidziyo yavo apo vatengi vachiisa mubhadharo wavo muchibvumirano chakangwara kumberi. Mune network ine vasingazivikanwe vatambi, chibvumirano chinounza rugare rwepfungwa kune vese vatengi nevatengesi vekomputa.
Mukurumbira - Kuzivikanwa kwemushandisi kunowedzera nekuve akavimbika uye ane mutoro wecompute mupi uye anoverenga mutengi, uye mukurumbira uyu wakachengetwa zvachose pane blockchain. Kuzivikanwa kwemushandisi kunowedzera mukana wekutora chikamu mumabasa ekomputa.
mari - HyperTokens ndiyo mari yekutengeserana inoita kuti kutenga nekutengesa komputa pamambure.
Kuwanikwa Kuchera - Vanhu vanogona kuchera maHyperTokens vachimirira makomitori emabasa, nekungowanikwa munzvimbo yekutandarira. Izvi zvinokurudzira vashandisi kujoina network uye kuita kuti zvishandiso zvavo zviwanikwe. Ndichiri munzvimbo yekutandarira, vashandisi vanogona kupokana nemamwe marongedzero asina basa kuti vaone kana vari zvechokwadi online. Kana vakakundikana kupokana chibatiso chavo chinounganidzwa nemudenhi. Huwandu hwem tokeni hunowanikwa kumigodhi hunodzikira nekufamba kwenguva, saka kusaina michina pakutanga kunowana akawanda ma tokeni
Kudzoreredza hutongi / Kuvhota - Node dzinotora chikamu mukupokana uye kupindura uye zvinokurudzirwa kubatsira kuchengetedza mhando ye network, uye kubvisa vatambi vakaipa. Node yega yega inobaya mamwe maodhi mune yakaoma / mhinduro maitiro ekuona kana iwo ari pachokwadi pavanoti ivo varipo. Shanduko huru munetiweki dzinogona kuvhoterwa, uye vhoti yako yakaremerwa nehuwandu hweHyperTokens yaunobata.
Hypernet yakagadzira komputa huru yepasi rese kuburikidza nekushandisa simba rekomputa rezvishandiso zvakavanzika. Mukutaura kwema layman, zvinoreva kuti pese pese magajeti akaita semalaptop, mafoni uye mapiritsi asiri kushandiswa, Hypernet inogona kushandisa iro simba, saka mawebhusaiti haapunzike nekuda kweserver kuwandisa. Zvakare, sezvo simba iri richigoverwa uye richipiwa masimba, pane mukana mushoma kwazvo wekuti chero data rakaomarara, rakaunganidzwa panguva yeCommerce transaction inogona kukanganiswa.
Tags: DACYakatemerwa Autonomous Corporationdecentralized komputahypernet